true tools /zu-ZA/tools-for-life/tools/steps/handling-confusion-in-the-workplace.html read 1 6 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/tools_zu_ZA.jpg AmaThuluzi AseMsebenzini
Omunye angakutshela ukuthi kukhona okuthile okudidayo ngomsebenzi wakhe. Futhi uma engazi ukuthi engakuphatha kanjani lokho kudideka, ngokuqinisekile uhlangabezana nalowomuzwa ngoba akanayo indlela yokukuxazulula. Ukudideka yinto ebonakala ngathi ayinaso isixazululo ngokushesha.
Isibonelo, uma uhamba ngaphandle kwendlu yakho futhi kungazelelwe kube nomoya ovunguzayo onamandla ovunguza, amaphepha nezingibe zikadoti yonke indawo, lokho kungaba nokudideka.
Esinye isibonelo kungaba uma ubusebenza kwi-computer yakho bese kungazelelwe i-screen siqale ukulokoza bese isithombe sinyamalala.
Uma ubheka izinto eziningi ezingakuthonya futhi zikuphathe kabi empilweni yakho, kwesinye isikhathi kubonakala ngathi bonke ubunzima budalwa uhlobo oluthile lokudideka. Umsebenzi engabona ukuthi kukhona okwenzekayo okumdidayo, kepha uma engazi ukuthi kufanele ekusingathe kanjani, amane nje eqhubeke futhi ngendlela thile ephume kukhona eselungile.
Uma unezinkinga eziningi ezingasongululwanga, zibangela ukudideka okukhulu. Njalo ngezikhathi ezithile, isisebenzi singathola imiyalo ehluke kakhulu kwesinye isikhathi size simtshele ukuthi enze okuphambene nalokho—aze adideke kakhulu.
I-factory yesimanje engalawulwa kahle kangangoba yonke indawo ibonakala ingukudideka okukhulu—idideke kangangokuba akubonakali ngathi ikhona indlela yokuyisingatha futhi ithuthukiswe.
Abantu bavame ukuncika enhlanhleni ukuze ibasize bephume kunoma yikuphi ukudideka okukhulu ukuze bekwazi ukukusingatha. Inhlanhla isho ukuncika kwenye into ngaphandle kokwenza izinqumo zakho ngokwenzekayo esikhathini esizayo, lapho wena ungeke ukwazi ukukulawula lokho. Ukube ubungadedela isiteringi sihamba ngenkathi ushayela imoto futhi unethemba lokuthi imoto ihlala emgwaqweni ngenhlanhla, ubuyodumala kaningi. Futhi kunjalo empilweni. Lezo zinto ongazisingathiyo futhi uyethemba nje ukuthi inhlanhla izozixazulula azivami ukusebenza.
Kungenzeka ukuthi uke wezwa ngaye noma wabona umngani wakho nje ongazinaki izikweletu okumele ezikhokhe futhi egedle amazinyo ngenkathi enethemba lokuthi uzowina i-lotto noma umjaho wamahhashi bese enze imali eningi ezokwazi ukuxazulula zonke izinkinga zakhe. Kungenzeka ukuthi uyabazi abantu abaphathe izimpilo zabo ngale ndlela iminyaka. Kepha ukuthembela enhlanhleni ukuthi ikubone ekudidekeni kuyafana nokungabe usabamba isteringi nokuqondisa imoto yakho. Ukudideka ngeke kuzisingathe.
Kungaba ukuhlakanipha ke ukuqonda kahle ukuthi ukudideka kuyini nokuthi kungasingathwa kanjani.
UKUDIDEKA KANYE NE-STABLE DATUM
Njengoba kushiwo ngenhla, ukudideka yinto ebonakala ingenaso isixazululo ngokushesha.
Kepha ukunika incazelo ebanzi, UKUDIDEKA YILAPHO KWENZEKA OKUTHILE ONGAKUBIKEZELANGA (NOMA ONGAKUCABANGANGA UKUTHI KUNGENZEKA).
Ukube ubungama kwi-traffic enzima, kungenzeka uzizwe udidekile yizo zonke iziqubu ezikuzungezile. Ukube ubungama kwisivunguvungu esinamandla, esinamaqabunga namaphepha endiza ekuzungezile, ubuzozizwa udidekile.
Kungenzeka yini ukuthi uqonde ukudideka? Ngabe ukudideka kungaphulwa kube izingxenye? Yebo, futhi yebo.
Isibonelo, ukube ubungumamukeli enkampanini enkulu futhi kunezingcingo eziyishumi eziza zonke ngasikhathi sinye, ungazizwa udidekile. Kepha ingabe ikhona impendulo yalenkinga?
Noma, uma ubuyinduna ye-workshop futhi ube nezimo eziphuthumayo ezintathu futhi kwenzeke ingozi ngasikhathi sinye, ingabe ikhona impendulo kulokho?
Yebo, ikhona. Ungasingatha nanoma ikuphi ukudideka uma usukwazi ukuthi ukudideka kuyini ngempela nokuthi ungakusingatha kanjani.
Ukudideka kuwukudideka kuphela nje uma zonke izingcezu noma izingxenye zento zihamba. Ukudideka kuwukudideka kuphela uma nje kungekho ingxenye yakhona ecacile kuwena noma okuqondwayo.
Ukudideka kuyimbangela eyisisekelo yobuwula. Kunoma ngubani oyisiphukuphuku, zonke izinto ngaphandle kwezilula kakhulu ziyadida. Ngakho-ke uma wazi ukuthi yikuphi ukudideka okwakhiwa ngakho, noma ngabe ukhanya kangakanani wena, uzobe uqhakazile.
Uma wake wafundisa umuntu ongahlakaniphile kakhulu, uzokuqonda kahle lokhu. Uzama ukuchaza ukuthi into ethile isebenza kanjani. Uzokuphindaphinda ukuphindaphinde. Bese umthumela ukuba ayokwenza lento futhi uya ngokushesha enze umsangano ophelele wayo. Uthi “ubengaqondi” noma “akakubambanga." Iqiniso elilula ukuthi ubedidekile.
Amaphesenti ayisishiyagalolunye ayo yonke imfundo iyehluleka, lapho ihluleka, ingoba umfundi udidekile. Akadideki kuphela ngalokho azama ukufunda ukukwenza, kodwa empilweni uqobo. Lapho omunye ehluleka, kwenzeka ngoba umuntu udidekile. Ukuze ufunde ngomshini noma ngokuphila impilo, kufanele ukwazi ukuthatha ukudideka ukuhlukanise futhi ukusingathe ukuze kungabikhona ukudideka kuwe.
Ekusingatheni ukudideka, kukhona umthetho ongawusebenzisa. Ibizwa ngeMFUNDISO YE-STABLE DATUM. IMfundiso isho umthetho bese i-stable datum isho iqiniso noma ucezu lolwazi noma ngisho into ethembekile futhi engaguquki. Ungayisebenzisa ukukusiza uqonde ukudideka noma uvikele nokuthi kungenzeki.
Isibonelo, uma ubona izingcezu eziningi zamaphepha zindiza egumbini, zingabukeka zidida kuze kube yilapho ukhetha ucezu lwephepha olulodwa kube yilona olubhekayo. Ungabona ukuthi konke okunye okusendlini bekunyakaza (kuhamba). Ngamanye amagama, ukunyakaza okudidayo kungaqondakala ngokuthola nokuthatha isinqumo sokuthi into eyodwa ayinganyakazi.
Ungakwenza lokhu ngokwakho uma uthatha izingxenye ezimbalwa zamaphepha bese uziphonsa emoyeni. Manje thatha enye yezingcezu zephepha bese uwupenda umbala omnyama. Phonsela phezulu futhi izingxenye zephepha bese ubona elimnyama. Kubukeka sengathi kuzoba nokudideka okuncane ngoba usebenzisa i-stable datum esisodwa ukuqondanisa (ukubeka ngokuhleleka) konke ukudideka.
Emgudwini we-traffic, zonke izimoto ezihambahamba zizobe zidida ngaphandle kokuthi ubone imoto eyodwa bese uthatha isinqumo sokuthi enye ayihambi ngokuhlobene nezinye izimoto. Ungabheka ke ezinye izimoto uma uqhathanisa nale oyikhethile bese ubona ukuthi i-traffic ihamba kanjani.
Umuntu owamukelayo izingcingo eziyishumi ngaso leso sikhathi uxazulula ukudideka ngokunquma ocingweni olulodwa njengocingo lokuqala lokuthola ukunakwa kwakhe. Akukhathalekile ukuthi uphendula yiphi kuqala. Ukudideka “kwezingcingo eziyishumi zonke ngasikhathi sinye” kunciphisa ukudideka ngesikhathi lapho ekhetha ucingo olulodwa oluzophendulwa.
Induna yesitolo, eyethulwe nezimo eziphuthumayo ezintathu nengozi, udinga kuphela ukuthi athathe isinqumo sokuthi yiphi azoqala ngayo ukuze enze lesi simo singadideki futhi abeke izinto zibephansi kwakhe.
Kuze kube yilapho ukhetha ucezu olulodwa lolwazi, into eyodwa, into eyodwa ekudidekeni—i-stable datum—ukudideka kuyaqhubeka. Into eyodwa oyikhethayo kanye noyisebenzisayo iba i-stable datum yezinsalela zezinto ezisekudidekeni.
Noma yiluphi ucezu lolwazi—ukusho, ngokwesibonelo, ukuthi ungabhaka kanjani ikhekhe—lwakhiwe kusuka kwi-datum eyodwa. Lokho kuyi-stable datum sayo.
Lapho ubhaka ikhekhe, i-stable datum kungenzeka ukuthi lapho ufaka zonke izithako kuhhavini, iyabhaka futhi ipheka kube ikhekhe. Uma uzama ukwenza i-stable datum into engalungile noma engamanga, lonke ulwazi owawunalo lungadida. Isibonelo, uma umuntu ethi ihhavini iyinto embi futhi amakhekhe akufanele aphekwe kuhhavini, yonke le ndaba ingakudida.
I-stable datum akudingeki nokuba sibe esilungile. Yinto eyodwa nje eqondanisa zonke ezinye futhi igcina izinto ukuze zingadideki ngokuphelele.
Uma ngabe ubufundisa umuntu ukusebenzisa umshini, uma ehluleka ukuqonda nokulandela izinkomba zakho, yena wenze lokho ngoba engenayo i-stable datum. Okokuqala kufanele aqonde iqiniso elilodwa. Lapho nje eseqonde futhi ebamba lelo qiniso elilodwa, angabamba amanye. Noma imuphi umuntu uzoba nenkinga esimweni esididayo kuze kube ebambe iqiniso elilodwa noma into eyodwa ngokuphelele.
ukudideka, noma ngabe kukhulu futhi kubonakala kulikhuni kangakanani ukunqoba, kwenziwe ngemininingwane, imithetho, noma izingcezu zento ethile. Bamba ingxenye eyodwa noma umthetho futhi uzokwazi ukubhekana nokudideka. Lapho usuqondile ukuthi ungayenza kanjani ingxenye eyodwa isebenze, bheka ukuthi ezinye zisebenza kanjani uma uziqhathanisa nayo futhi uyobe usuhlise ukudideka. Futhi ke, ukwenza ezinye izinto zihambisane nalokho okubambile, maduze uzokwazi ukulawula nokusingatha ngokuphelele ukudideka.
Lapho ufundisa umuntu ukusebenzisa umshini, ungamphothi imininingwane eminingi bese umbonisa izinto azenze ngokungalungile. Lokho kuzomdida futhi kuzomenza enze ubuwula. Thola indawo ethile ekudidekeni kwakhe ukuqala, i-datum eyodwa. Isibonelo, mtshele, “Nansi indlela oqala ngayo umshini.”
Uma uthola umuntu odidekile, kungenzeka ukuthi zonke izinkomba zimane zaphonswa kuye, ngaphandle kwakhe eziqonda, futhi ngenxa yalokho akanawo umbono ocacile wokuthi izinto zinjani nokuthi zisebenza kanjani. Ukuze uphathe umuntu onje, ungaqala ngokulula, njengokuthi, “lo ngumshini.” Ngemuva kwaloko umqinisekise. Menze ayizwe, aqambe kanye nayo, phusha kuyo. Futhi uzomangaliswa ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani, kodwa futhi uzomangala ukuthi ukuqiniseka kwakhe kukhula kanjani. Kuzo zonke izinto eziyinkimbinkimbi noma ezinzima okufanele azifunde ukuze akwazi ukusebenzisa umshini, kufanele aqale azi i-datum eyodwa. Akubalulekanga nokuthi iyiphi i-datum ayifunda kuqala, inqobo nje uma ekufunda kahle. Kungcono ngaso sonke isikhathi ukufundisa umuntu i-datum elula eyisisekelo. Ukwenza isibonelo, ungamkhombisa ukuthi umshini wenzani, ungamchazela ukuthi yini ekhandwa ngumshini noma ungamtshela ukuthi kungani yena ekhethwe ukuthi asebenze lo mshini. Kepha wena kufanele wenze i-datum eyodwa eyisisekelo icace kuye uma kungenjalo uzolahleka ekudidekeni.
Ukudideka akuqinisekile. Ukudideka kuwubuwula. Ukudideka kuwukungavikeleki. Uma ucabanga ngokungaqiniseki, ubuwula nokungavikeleki, cabanga ngokudideka futhi uzonemba.
Yini ke ukuqiniseka? Ukuqiniseka kuwukuntuleka kokudideka. Yini ke ubuhlakani? Ubuhlakani yikhono lokusingatha ukudideka. Kuyini ke ukuphepha? Ezokuphepha yikhono lokudlula noma lokuzungeza noma ukuletha ukuhleleka ekudidekeni. Ukuqiniseka, ubuhlakani nokuphepha kuwukuntuleka noma ikhono lokusingatha ukudideka.
Ngabe inhlanhla ihlangana kanjani nokudideka? Inhlanhla yithemba lokuthi elinye ithuba elingalawulwa lizokuthola. Ukuthemba enhlanhleni kuwukulahleka. Ngeke kukusize ekutheni uphumelele.